महल क्रश मा अनन्त रत्न पाउनुहोस्: के यो सम्भव छ? | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 04/09/2021 09:00 | अद्यावधिक गरियो 14/09/2021 10:30 | Android
यदि तपाइँ विश्वव्यापी धेरै खेलाडीहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ जो द्वारा मोहित गरीएको छ महल क्रश, यो पोस्ट तपाइँलाई चासो छ। पक्कै पनी तपाइँ पहिले नै धेरै राम्रो संग थाहा छ के बारे मा खेल को बारे मा छ र यसको महान गुणहरु के हुन्। तपाइँलाई अनौठो चाल पनि थाहा हुन सक्छ। जे होस्, के धेरै खेलाडीहरु को लागी खोजिरहेका छन् कसरी थाहा छ अनन्त रत्न महल क्रश पाउनुहोस्।
तर यो प्रश्न को सामना गर्नु अघि, यो विशाल र अत्यधिक लत रणनीति खेल को बारे मा केहि आधारभूत तथ्यहरु को समीक्षा गरौं। महल क्रश छ क्लासिक आरपीजी खेल (रोल खेल खेल, वा स्पेनी मा भूमिका खेल्ने खेल), जुन २०० 2006 मा रिलीज गरीएको थियो रमाईलो खेलहरु को लागी नि: शुल्क। तब देखि आज सम्म, यो धेरै सुधार र अपडेट गुज्रिएको छ।
यो ती वास्तविक समय रणनीति खेलहरु मध्ये एक हो, जसमा खेलाडी सटीक र छिटो हुन बाध्य छन्। त्यहाँ छन् धेरै कार्य, प्रचुर मात्रामा प्रत्यक्ष लडाई (लगभग उन्मत्त) ती एड्रेनालाईन वृद्धि बनाउन को साथ। ती ढिलो र बोरिंग खेलहरु को बारे मा बिर्सनुहोस् कि जो उनीहरु लाई निराशा खेल्छन्। महल क्रश अर्कै कुरा हो।
1 दुश्मन महल क्रश
2 रत्नको महत्त्व
3 कसरी महल क्रश अनन्त रत्न प्राप्त गर्न
3.1 रत्नहरू किन्नुहोस्
3.2 चाल (कानूनी) रत्न प्राप्त गर्न
दुश्मन महल क्रश
क्रश यो अंग्रेजी शब्द धेरै तरिकामा अनुवाद गर्न सकिन्छ: क्रश, क्रश, निचोड, निचोड, मा कदम, क्रश ... छोटो मा, क्रश। त्यो ठीक छ खेलमा हाम्रो मिशन: हाम्रो दुश्मन को महल क्रश।
अनन्त रत्न महल क्रश पाउनुहोस्।
यो लक्ष्य हासिल गर्न, खेलाडी संसाधनहरु को सबै प्रकार को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक छ सेना को व्यापक सूची उपलब्ध छ, यद्यपि सबैको आफ्नै विशेषताहरु र विशेषताहरु छन्। यो रणनीतिकार (त्यो हो, खेलाडी) हो जसले निर्णय गर्न को लागी कसरी उनीहरुलाई सफलता को लागी नेतृत्व गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो प्रयोग गर्नु पर्छ।
तर होशियार रहनुहोस्, यो केवल हमलाको बारेमा होइन। दुश्मनले सबै तरिकाले हाम्रो महल नष्ट गर्न कोसिस गर्नेछ। तेसैले, हामीले कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुदैन रक्षा.
महल क्रश को रणभूमि तीन लेन आकार को खण्डहरु को हुन्छन्। खेलाडी उनीहरु मा आफ्नो सेना (एक कार्ड द्वारा प्रतिनिधित्व) को तैनाती गर्नु पर्छ। प्रत्येक कार्ड मा एक विशिष्ट मूल्य छ मन अंक, जबकि प्रत्येक एकाई यसको आफ्नै छ जीवन बिन्दु र एक आक्रमणको प्रकार एक भन्दा फरक तपाईले सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ।
प्रत्येक लडाई पछि हामी अजीब छाती खोल्ने अवसर हुनेछ। के हामी यो मा पाउँछौं हामी सुधार र हाम्रा मेजबानहरु लाई निजीकृत गर्न सक्छौं। यदि हामी पाउँछौं स्तर माथि दिइएको एकाइ को लागी, यो पनि यसको हिट बिन्दुहरु र यसको लडाई क्षमता वृद्धि हुनेछ। यसले हाम्रो जितको सम्भावना बढाउनेछ। यो खेल को बारे मा अरु के भन्न? यसको ग्राफिक्स विस्तृत छन्, यो मुश्किल बाट हाम्रो फोन मा ब्याट्री शक्ति को उपभोग गर्दछ, र तपाइँ सजीलै संग चलाउन को लागी एक अत्यधिक शक्तिशाली इन्टरनेट जडान को आवश्यकता छैन।
राम्रो लाग्छ? यदि तपाइँ यो साहसिक जीउने हिम्मत गर्नुहुन्छ, यो धेरै सजिलो छ। महल क्रश गुगल प्ले स्टोर बाट बिल्कुल नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ, दुबै ट्याब्लेट र मोबाइल को लागी।
यो पनि जोडिएको हुनु पर्छ कि महल क्रश एक खेल मात्र 12 बर्ष भन्दा माथिका प्रयोगकर्ताहरु को लागी सिफारिश गरीएको छ। यो ४० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरीएको छ र हजारौं डाउनलोड को रेकर्ड।
खेल को आधारभूत को यो संक्षिप्त समीक्षा पछि, हामी विषय जसको लागी हामी यो टाढा आएका छौं मा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछौं: महल क्रश अनन्त रत्न र उनीहरुलाई प्राप्त गर्ने वास्तविक संभावना। र त्यो हो रत्न यस रणनीति खेल को वास्तविक पेट्रोल हो। तिनीहरूले हामीलाई नयाँ एकाइहरु र अग्रिम प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू खेल को एक आवश्यक तत्व हो।
महल क्रश मा अग्रिम र जीत को एक धेरै प्राप्त गर्न को लागी एक मात्र तरीका सम्भव भएसम्म धेरै रत्नहरु काट्नु हो।
हामी विभिन्न स्तरहरु को माध्यम बाट खेल्न र प्रगति को रूप मा, हामी जम्मा सुनको सिक्का। उनीहरु संग हामी नयाँ एकाइहरु र कौशल किन्न, अक्षरहरु अनलक र, अन्ततः, हाम्रो युद्ध क्षमता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो शैली को धेरै अन्य खेल जस्तै, यी सुन को सिक्का अक्सर अपर्याप्त छन्। हामी उनीहरुलाई केहि इकाईहरु वा फाइदाहरु को उपयोग गर्न सक्दैनौं जुन केवल रत्नहरु को माध्यम बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जब हामीसँग खजाना चेस्ट को कुनै पनी खोल्न को लागी अवसर छ जुन हामीले पहिले उल्लेख गरेका थियौं, हामी देख्नेछौं कि ती मध्ये धेरै रत्नहरु छन्। खेल को "प्रीमियम" मुद्रा। छाती खोल्नुहोस् र तपाइँ अनन्त महल क्रश रत्न हुनेछ (म चाहन्छु कि यो भनिएको जस्तै सरल थियो)। केवल उनीहरु संग तपाइँ खेल मा सबै भन्दा राम्रो कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै कुरा को एक सूची हो उनीहरु हामीलाई गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ (जो पहिले नै खेलेका छन् हामी के बारे मा कुरा गर्दैछौं थाहा छ):
हाम्रो महल को लागी सजावटी तत्वहरु प्राप्त गर्नुहोस्।
तुरुन्तै क्वेस्ट बोर्ड मा एक मिशन पूरा गर्नुहोस्।
रक्षात्मक ढाल किन्नुहोस् (१० घण्टाको काठको ढाल = ३०० रत्न; २४ घन्टा फलामको ढाल = g०० रत्न; -२ घण्टा सुनको ढाल = १,५०० रत्न)।
५० रत्न को लागी सम्मान को १,००० ब्याज सम्म किन्नुहोस् (यो अपरेशन मात्र एक पटक एक दिन को अनुमति छ)।
साथै गोदाम र हीरोज वेदी मा ठाउँहरु किन्नुहोस्।
पसल मा सुन वा मन किन्नुहोस्।
5 अतिरिक्त कालकोठरी प्रयास सम्म पाउनुहोस्।
धेरै बिल्डर्स एकै साथ धेरै भवनहरु अपग्रेड गर्न को लागी भाडामा लिनुहोस्।
पुरानो एक (३०० रत्न) प्रतिस्थापन गर्न को लागी एक नयाँ नायक प्रतिभा सिर्जना गर्नुहोस्।
एक सैन्य शिविर मा इकाई निर्माण प्रक्रियाहरु को लागी प्रतीक्षा समय हटाउनुहोस्।
हिज्जे र एकाई अपग्रेड स्वतः समाप्त हुन्छ।
अनियमित उच्च स्तर नायक उत्पन्न।
तुरुन्तै युद्ध पछि नायक पुनरुत्थान (लागत: १० रत्न)।
स्वचालित रूपमा एक भवन सुधार प्रक्रिया समाप्त।
स्वचालित रूपमा भवन निर्माण प्रक्रिया समाप्त।
रत्न मा लागत तुरुन्तै स्तर मा गणना गर्न को लागी, निम्न उपाय एक सन्दर्भ को रूप मा लिन सकिन्छ: प्रति घंटा5जवाहरात को एक आधारभूत लागत (वा प्रति दिन 120 रत्न) प्लस 250 रत्न को एक अतिरिक्त लागत।
तर रत्न को रूप मा मूल्यवान छन् किनकि उनीहरु दुर्लभ छन्। तपाइँ उनीहरुलाई राम्रो संग प्रयोग गर्नु पर्छ, समझ र विवेक संग। हामी उनीहरुको उपयोग गर्न को लागी अधिक रणनीतिहरु र कार्ड को बिभिन्न प्रकार हाम्रो निपटान मा सक्षम हुन को लागी। तिनीहरू बर्बाद हुनु हुँदैन!
कसरी महल क्रश अनन्त रत्न प्राप्त गर्न
त्यहाँ धेरै खेलाडीहरु जो अक्सर सिक्का र सुन र विशेष गरी रत्नहरु को कठिनाई बाट निराश छन्। हामी उनीहरुलाई छातीमा भेट्टाउँछौं, यो सत्य हो, तर हामीले चाहेको मात्रामा छैन। महल क्रश सृष्टिकर्ताहरु यो तरीकाले पैसा खर्च गर्न को लागी खेलाडीहरुलाई "प्रोत्साहित" गर्न को लागी व्यवस्था गरीएको हुन सक्छ रत्न किन्नुहोस् उनीहरुलाई वास्तविक पैसाको साथ चाहिन्छ।
एक छिटो (यद्यपि सस्तो छैन) महल क्रश मा रत्न प्राप्त गर्न को लागी उनीहरु लाई किन्नु हो
यो महल क्रश अनन्त रत्न प्राप्त गर्ने मौका हो, तर एकै समयमा यो एक हो खर्च कि सबै मान्न तयार छैनन्। साथै, के यो रमाईलो यो मात्र भुक्तानी गरेर एक खेल को उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागी हो? हामी मात्र केहि धेरै विशिष्ट मामलाहरुमा यो संसाधन को सिफारिश गर्दछौं।
उदाहरण को लागी, यदि हामी आफैंलाई एक स्तर मा अड्किएको पाउँछौं र त्यहाँ अगाडी बढ्न को लागी कुनै तरीका छैन। हामीले सफलता बिना सबै प्रयास गरेका छौं। त्यसैले एक सानो धक्का (हाम्रो जेब खरोंच) मद्दत गर्न सक्छ। याद गर्नुहोस् कि यो मात्र यसको लायक हुनेछ यदि यसको सट्टामा हामी धेरै रमाईलो को धेरै घण्टा पाउँछौं। र मात्र यदि हामी गर्छौं धेरै समयनिष्ठ यो संसाधन को उपयोग.
यो कसरी भयो? रत्न "किन्नुहोस्" बटन मा क्लिक गरी किन्न सकिन्छ, जुन बिक्री को लागी रत्न को संख्या को छेउमा प्रदर्शित हुन्छ, पर्दा को माथिल्लो दाहिने कुनामा मा स्थित छ। रत्नहरु पनि खेल मा पसल खोल्न र "खजाना" मा क्लिक गरेर किन्न सकिन्छ। रत्न को मात्रा हो कि हामी यस तरीका बाट प्राप्त गर्न सक्छौं कि हामी डलर मा कि यूरो मा किन्न मा निर्भर गर्दछ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ छन् ofertas जसको लागि खेलाडी आफ्नो पहिलो खरीद गरे पछि रत्न को एक अतिरिक्त राशि प्राप्त गर्दछ।
के हामी कुनै पनी तरिका मा सल्लाह दिन सक्दैनौं को उपयोग हो अवैध ह्याक वा चाल महल क्रश अनन्त रत्न प्राप्त गर्न। यो एक जाल हो कि यो पनि, के हामीले पहिले टिप्पणी गरिसकेका छौं, यसको सबै अनुग्रह र अर्थ को खेल स्ट्रिप्स।
चाल (कानूनी) रत्न प्राप्त गर्न
महल क्रश अनन्त रत्नहरु?
जे होस्, त्यहाँ बिल्कुल वैध र कानूनी तरीकाहरु छन् महल क्रश मा अतिरिक्त रत्न प्राप्त गर्न को लागी र खेल मा अग्रिम धोखा बिना र पैसा खर्च नगरीकन। उनीहरु जादुई चालहरु हैन कि हामीलाई एक स्ट्रोक मा अनन्त रत्नहरु दिनेछन्, तर उनीहरु एक महान मद्दत हुनेछन्। त्यहाँ हाम्रो जानुहोस् सुझावहरू:
फोरम समय समयमा समय संगठित छ कि घटनाहरु मध्ये केहि मा भाग लिने प्रयास गर्नुहोस्। IGG खेल, राम्रो संग मोबाइल फोन खेल प्रयोगकर्ताहरु लाई थाहा छ। केवल भाग लिन को लागी हामी रत्न को एक सानो रकम प्राप्त हुनेछ, अरु केहि नगरीकन।
एप्स बजार मा ५ तारा संग खेल को मूल्या्कन गर्नुहोस्। यसको लागी इनाम १०० भन्दा कम रत्न हो।
महल संघर्ष खेल्न को लागी एक साथीलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् मार्फत फेसबुक, ट्विटर, गुगल ... वा मात्र एसएमएस को माध्यम बाट। यस संग तपाइँ २०० रत्न कमाउनुहुनेछ।
खेल द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन भिडियो हेर्नुहोस्। प्रत्येक दृश्य, जो सामान्यतया एक मिनेट वा कम को बारे मा रहन्छ, एक मणि संग पुरस्कृत गरिन्छ।
साइन अप गर्नुहोस् ट्यापजॉय। यो अनुप्रयोग अन्य अनुप्रयोगहरु डाउनलोड वा विभिन्न सम्बन्धित अनुप्रयोगहरु बाट अन्य वेब खेल खेल्न को लागी विदेशी मुद्रा मा रत्न प्राप्त हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » Android » महल क्रश मा अनन्त रत्न पाउनुहोस्: के यो सम्भव छ?